शीर्ष ताजा स्थिति ट्रेन 1: पालेर्मो को लागी मिलान
यो यात्रा इटाली को एक विशाल swath देख्नुहुन्छ, यो देशको बुट को टिप गर्न मिलान सबै तरिका तपाईं लिन्छ रूपमा. बाटो साथ, तपाईं तटवर्ती सफा गर्ने भिस्टा र टस्कनीको पहाडहरू पाउनुहुनेछ. यो हो, को पाठ्यक्रम, रोम र यसको ईतिहासको संगमरमरको मूर्तिहरु बाहेक.
युरोप मा सबै भन्दा राम्रो ताजा स्थिति रेल लागि हाम्रो दोस्रो छान्ने ज्यूरिख चालु भएको छ, हैम्बर्ग गर्न स्विट्जरल्याण्ड, जर्मनी. यदि तपाइँ एक स्लीपर ट्रेन सेवा को लागी खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईं Nightjet विचार गर्न छौँ. जबकि यो रेल लागि धेरै ननस्टप विकल्प उपलब्ध छन्, के तपाईं परिवर्तन दिन्छ कि एक मार्ग मार्फत जाँदै विचार गर्न सक्नुहुन्छ. को देहात सुन्दर छ, र ट्रेन meanders माध्यम असंख्य साना गाउँहरू बाटो साथ, हानोवर शहर सहित. यी शहरहरू तपाईंले समय छ भने आफ्नो यात्रा मा राम्रो तरिकाले लायक एक स्टप छन्. नबिर्सनुहोस् शानदार दृश्य Alps को तपाईं या त अनुभव गर्न सक्षम हुनुहुनेछ.
अझ राम्राे, तपाईं हैम्बर्ग आफ्नो बाटो बनाएको एकपटक तपाईं बर्लिन देखि एक छोटो दूरी हुनुहुन्छ. हालको जर्मन राजधानी यसको हिप नाइटक्लब र हिपस्टर संस्कृतिमा यसको पूर्ण समर्पणको लागि परिचित छ. सडक कलाको आनन्द लिनुहोस् र राम्रो कफीको बखत तपाईं बर्लिन पर्खालको भित्ताचित्रहरू अवश्य चिन्ता गर्नुहुन्छ.
शीर्ष ताजा स्थिति ट्रेन 3: ब्रसेल्स भियना
यो प्रसिद्ध मार्ग प्रति हप्ता पटक चल्छ. पनि Caledonian ताजा स्थिति भनिन्छ, यो स्लीपर सेवा लागत प्रभावकारिता संग लक्जरी मिश्रण. तपाईं खाना समावेश सम्झौताहरू पाउन सक्नुहुन्छ, पेय, र पाठ्यक्रम, सुत्ने केबिनहरू.
माननीय वर्णन 6: कोपनहेगन देखि बर्लिन
तपाईं यो रेल मा पूर्ण निद्रा बर्थ पाउनुहुनेछ बेला, तपाइँले दैनिक रातको रूटिंग उपलब्ध पाउनुहुनेछ. यी राति तपाईं छोडेर आउन दिन को लागि ताजा बिहान पुग्नु गर्न अनुमति दिन्छ. एक गैर-ताजा स्थिति रेल संग सबै भन्दा राम्रो अनुभव लागि, तपाईं पहिलो श्रेणीको टिकट आरक्षित गर्न चाहानुहुन्छ. यी टिकट त्यस्ता अतिरिक्त सामान रूपमा वृद्धि भत्तों साथ, समावेश खाना, र अधिक निजी केबिन अनुभव.
जब यात्रा युरोप रेल बाट तपाइँ छनोटको लागि बिग्रिनु भयो. यो स्कटल्याण्ड वा स्पेन हो कि, नर्वे, वा स्वीडेन, ताजा स्थिति रेल सबै भन्दा राम्रो सेवा केही वरिपरि अर्को बिहान आइपुगेपछि लागि हो ताजा र आफ्नो दिन आउन लागि तयार. के तपाईं उपलब्ध विकल्प अधिकता छ जबकि, जस्तै ट्रेन होटल वा रातरात स्लीपर ट्रेनहरू लामो प्राग, पोल्याण्ड, लिस्बन, वा मस्को पनि, आफैलाई एक अनुमोदन गर्न र सट्टा युरोप यी छ शीर्ष ताजा स्थिति रेल मारा. तपाईं खेद छैन!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “शीर्ष6यात्राको लागि युरोपमा स्लीपर ट्रेनहरू” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र हामीलाई क्रेडिट दिन सक्छ यो ब्लग पोस्ट गर्न लिंक. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/sleeper-trains-europe/?lang=ne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#नाइटट्रेन यूरोप ट्राभेलिंग NightTrains SleeperTrains रेल यात्रा